Midowga Musharixiinta oo Banaanbax kaga dhawaaqay Muqdisho | Banaadir Times
HomeUncategorisedMidowga Musharixiinta oo Banaanbax kaga dhawaaqay Muqdisho
Midowga Musharixiinta oo Banaanbax kaga dhawaaqay Muqdisho
Madaxweyn ihii hore ee Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Midowga Misharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday iyo khilafka weli kajira doorashada Soomaliya.
Sheekh Shariif oo Warbaahinta kula hadlay muqdisho ayaa sheegay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu Maalintii lixaad shi sharci darro ah ku joogo Villa Soomaaliya, isaga oo uu dhamaaday muddo xileedkiisa.
Waxaa u sheegay in dalkaan ay aheyd in ay ka dhacaan doorashooyin, hayeeshee aysan muuqan ififaalo ku aadan in dalka ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay, isla markaana loo baahan yahay in Shacabka Soomaaliyeed ay isku tashadaan.
Sheekh Shariif waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in Madaxda dowladda ee muddo xileedkooda uu dhamaaday aysan xalka qeyb ka aheyn, balse ay xaalada buur wadaan, waxaana uu ku dhawaaqaan banaanbax nabadeed oo uu sheegay in lagu dalbanayo inay dhacaan doorashooyin loo dhan yahay.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo isagana hadlay waxaa uu sheegay in banaanbaxaas uu maalinta Jimce ah ee soo socota oo taariikhda ku beegan tahay 19/2/2021 uu ka dhacayo Taalada Daljirka Daahsoon ee degmada Boondheere.
Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowr jeer waxaa ay ku dhawaaqeen banaanbaxyo balse aysan dhicin, hayeeshee waxaa jirtay in banaanbax ka dhacay degmada Yaaqshiid in ay ka dhalatay is rasaaseyn dhex-martay ciidamada dowladda iyo kuwo ilaalo ka hayay dadka banaanbaxayay.
Previous articleGuddoomiye Cusub oo loo Magacaabay degmo ka tirsan Gobolka Banaadir
Next articleRW Rooble oo amray in si deg deg ah loo furo wadada dabka